200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347 Miisaaniyadda Soomaaliya waxa ay buuxisay shuruudihii hay’adda lacagta aduunka, waxaa sidaas sheegay sarkaal ka tirsan IMF | Shabakada Warbaahinta Times
Miisaaniyadda Soomaaliya waxa ay buuxisay shuruudihii hay’adda lacagta aduunka, waxaa sidaas sheegay sarkaal ka tirsan IMF
Muqdisho (Caasimadda Online): Miisaaniyaddii ay toddobaadkan ansixiyeen Baarlamanka Soomaaliya waxa ay la jaanqaadeysaa is bedelka dhinaca lacagaha ah ee ay sameysay dowladda markii ay ku biirtay barnaamij ku deeqaha lacagaha oo caalami ah bishii Maajo, waxaa sidaas u sheegay Reuters masuul ka tirsan IMF-ta.
Somalia waxa ay haatan ku jirtaa qiimeyntii labaad oo 12 bilood ah oo ay ku sameenayaan shaqaale u xil saran IMF-ta kaddib laban sano oo ay xasarado iyo dagaalo ku jirtay, buuxinta shuruucda lacagaha ee IMF-ta waxa ay u fureysaa albaabaddii ay ku heli lahayd deymo iyo in loo ogolaado maalgalin dhaqaale oo ay ka hesho haayaddaha dhaqaalaha caalamiga ah.
Miisaaniyaddii $274 million ee la meelmariyey arbacaddii waxaa qeyb ka ah tallaabooyin la filayo in sare loogu qaado dhakhliga la soo uruuriyo $20-$25 million, Waxaa ku jira soo kordhinta iibka iyo canshuurta lacagaha shirkadaha isgaarsiinta iyo in meesha laga saaro canshuurtii aan laga qaadi jirin sharci dejiyeyaasha, sidaas waxaa yiri Mohammed Elhage oo hogaaminaya shaqada IMF-ta Somalia.
“Kuwani waa calaamado aad muhiim u ah.” Waxa uu sheegay intii ay socotay booqashadii bishii September, in IMF-tu ay ka niyad jabsaneyd horumarka ay sameysay dowladda, taas oo xafiiska la wareegtay doorashadii Febraayo kaddib, Laga soo bilaabo September ilaa iyo hadda, waxaan aragnaa ka’gonaansho is bedel oo xooggan, masuuliyiinta waxa ay si dhaw uga shaqeenayaan waxa loo baahan yahay in la sameeyo.
Miisaaniyadda waxa ay muujineysaa in dowladdu qabatay ku dhawaad $156 million oo ah dhakhliga gudaha iyo $118 million oo deeqo ah, Dalka ka dhisan geeska Africa waxa uu ka soo kabanayaa labaataneeyo sano oo colaad ah iyada oo maleyshiyada Al Shabab wali yihiin Qatar.
Miisaaniyadda cusub wali waxaa aad ugu badan deeqaha, kuwaas oo sanadkii hore ku qarash gareeyey ku dhawaad $1.5 billion deeqaha raashinka, caafimaadka iyo nadaafadda, Kor joogeyaasha waxa ay tilmaamayaan miisaaniyadda cusub iyo meelmarinta Baarlamaanka in ay tahay tallaabo hore loo qaaday.
“Haddii ay IMF-ta ku qanacdo, taasi waxa ay muujineysaa in dowladdu ay bilowday soo uruurinta dhakhliga,” waxaa sidaas yiri dimlomaasi reer galbeed ah.
“Haddii ay helaan deymo, taasi waxa ay caddeyneysaa in dahab ka dambeeyo qaanso-roobadka.”
Deymo ay ka hesho IMF-ta waxa ay dowladda dhexe siin doontaa fursad ay ku saameyso dowlad gobolleedyadyada xubnaha ka ah, ayuu intaa raaciyey dimlomaasiga.
Dowlad gobolleedydu waxa ay xukumadda Muqdisho ku khilaafsan yihiin qodobo dhawr ah oo ay ka mid tahay xasaradda u dhexeysa Qadar iyo dalalka kale ee Khaliijka.
Deymaha dibadda Soomaaliya looga leeyahay waxa ay gaareysa 5.2 billion sida ay sheegtay IMF-ta. Iskama aysa gudin tan iyo markii uu dagaalka sokeeye ka dilaacay muddo 25 sano hadda laga joogo, IMF-tu waxa ay sheegtay toddobaadkan koboca dhaqaalaha waxa uu gaari doonaa 2.5 boqolkiiba sanadka 2018 isaga oo ka soo booday 1.8 oo uu ahaa sanadkan, markaas oo ay abaraha iyo amaan daradda ka hoos marisay sadaashadii IMF-ta oo ahayd 2.5 boqolkiiba.
The post Miisaaniyadda Soomaaliya waxa ay buuxisay shuruudihii hay’adda lacagta aduunka, waxaa sidaas sheegay sarkaal ka tirsan IMF appeared first on Caasimada Online.